Izindaba - Zhejiang Sanmen Viair Industry
ZHEJIANG SANMEN VIAIR INDUSTRY CO., LTD. yasungulwa ngo-August 1988. Sisebenza ngokukhethekile ekukhiqizeni amacansi ezimoto futhi manje sesingomunye wabahamba phambiliumata wemoto kanye nomata wesicabha abakhiqizi eChina. Imikhiqizo yethu ithunyelwa kuwo wonke umhlaba, futhi imakethe enkulu yi-USA, Europe, Canada. singabahlinzeki bemikhiqizo ethile edumile, izitolo ezinkulu kanye nabathengisi abanjengoWal-mart, COSTCO, HOMEDEPOT, ROSS, TARGET, AUTOZONE, DG, ALDI, LIDL, METRO, TESCO, Carrefour, Auchan, Michelin, Goodyear, Armor All, Dickies njalo njalo. I-Viair iphase isitifiketi sesistimu yekhwalithi yamazwe ngamazwe ye-ISO 9001, Ngokuzikhandla kwabantu bakwa-Viair, inzuzo yethu yokuthengisa ifinyelele ku-32 million US Dollars.
Sakha ithimba lethu labaphathi ukuze lilawule ikhwalithi iye kwezingcono kakhulu futhi sihlanganise izinsiza kuhulumeni ongcono kakhulu. Lonke i-oda lingalandelelwa libuyele emthonjeni nalapho liya khona iqoqo ngalinye lezinto ezingavuthiwe.Sidale ithimba lethu lokuklama, futhi ngokuyisisekelo yonke into ngenyanga sizoba nezitayela zethu zokuklama ukuze izivakashi zikhethe.Izitayela ezintsha zokukhohlisa zithandwa kakhulu ngamakhasimende.Sizoqhubeka nokuthuthukisa abaphathi bethu futhi sisungule imikhiqizo yethu.
Eminyakeni yamuva nje, sitshale imali eningi emishinini yethu kakhaphethi, sikhiqiza futhi siklama okhaphethi bezitayela ezahlukene ngokwethu, ukuze kwandiswe amathuba okuklama kwemikhiqizo. Phakathi naleso sikhathi, singakwazi futhi ukulawula izindleko ngokwethu, ukuze amakhasimende akwazi ukuthenga imikhiqizo enekhwalithi ephezulu kanye nenani eliphansi ngangokunokwenzeka.Sengeze umshini omkhulu wokunyathelisa, ukuze imikhiqizo yethu ibe yinqwaba, izivakashi zinezinketho eziningi.
Njalo ngonyaka, sihambela imibukiso eminingi yasekhaya, efana neCanton Fair, DOMOTEX kanye I-Automechanica, futhi sihlangane namakhasimende ethu amadala namasha ukuze sixoxisane ngama-oda futhi sibheke ikusasa.
Imikhiqizo ye-Viair, ikhwalithi ephezulu, inoveli umklamo.Viair people, abanomdlandla futhi professional. Omata bezimoto kanye nomata bezicabha, I-Viair iyisinqumo sakho sochwepheshe.